७० करोड आ’रोपलाई पुष्टि नै गर्न नसकेसी एक युवाले ‘गोकुल तिमी फर्केर आउ यो राष्ट्रलाई तिम्रो खाचो छ’ भन्दै यस्तो लेख लेखे
October 30, 2020 October 30, 2020 adminLeaveaComment on ७० करोड आ’रोपलाई पुष्टि नै गर्न नसकेसी एक युवाले ‘गोकुल तिमी फर्केर आउ यो राष्ट्रलाई तिम्रो खाचो छ’ भन्दै यस्तो लेख लेखे
काठमाण्डौं।हो ,मलाई पनि लाग्थ्यो तिमीले त्यसो गरेउ कि भन्ने किनकी म तिम्रो बारेमा धेरै जानकार थिईन । जब तिम्रा बारेमा यति धेरै नफरतका ज्वाला निस्कन थाले अनि मलाई तिम्रो बारेमा जान्ने जिज्ञासा जाग्न थाल्यो । किनकी, म जहिले पनि जिज्ञासु छु ।
म बुझदै गए । तिमीले बोलेका कुरा युट्युब मार्फत हेर्दै गए । त्यतिले मात्र मलाई चित्त बुझाउन सकेन, अनि महिले तिम्रा जिल्ला तिरका फेसबुकेहरुसंग सम्पर्क गर्ने काम अगाडी बढाए । कुरा गर्न सुरु गरे, तिम्रो बारेमा सोधपुछ गरे, मलाई चाहिएको सूचना लिए । अनि, म ढुक्क भए ।
तिमीबाट त्यो काम भएको हुन सक्दैन । किनकी, तिम्रो स्वभाव त्यस्तो हैन छैन र रहेनछ । मलाई लाग्थो पार्टी फरक हुँदा बिरोध गरिन्छ । तर मलाई थाहा भयो त्यसो हैन रहेछ । आज काभ्रेमा कुनै पार्टी हैन, सारा काभ्रेली जनता चिन्तित रहेछन् । किनकी, उनीहरुले देशको राजनितीमा भूमका खेल्न सक्ने नेतृत्व आज राम्रो काम गर्दा गर्दै संकटको सामना गर्दै गरेको देखेका छन्।
मैले तिम्रा बारेमा धेरै कुरा खोजीगर्दा एमाले ,मावोबादी र काग्रेस सबैलाई सोधेको थिए । तर, तिम्रो बारेमा मैले कुनै विवाद पाईन । अफवाहको पछिभन्दा पनि बरु चिन्ता गरेको पो पाए । तिमीले सफाई पाउछौ कि पाउदैनौ भन्ने । अनि फेरी तिमी विकास र समृद्धि बोकेर जिल्ला फर्कन्छौ कि फर्कदैनौ भनेर उनीहरुले चिन्ता गरेको पो पाए ।
तर मेरो जिज्ञासु मनले खोजेका कुराका आधारमा म भन्छु , कि यो देशलाई तिम्रो खाचो छ ,तिमी फर्केर आफुलाई नि र्दोष साबित गरेर आउ । अनि फेरि हिजोको जस्तै आँट र साहसका साथ काममा लाग । किनकी, म मनै देखिको कुरा भन्छु । जबदेखि तिमी सरकारमा छैनौ त्यस दिनदेखि नुन बिनाको तरकारी जस्तै भएको छ । सरकारनै नभएको जस्तो कताताकता खन्लो र सुनसान पो भएको छ ।
अरुले जे भनुन् मैले तिम्रा बारेमा खोज्दै जादा देखिएका तथ्य र लागेको आरोपले थप अझ जान्ने जिज्ञासा जागेको छ ।समयक्रममा यी सत्य तथ्य सहित आउने छन् ।१. प्रिय गोकुल,तिमी संचार मन्त्री भए पछि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम नाफामा जान लाग्यो । तिमीले फोर जि सुरु गरायौं त्यहाँ पनि तिमीलाई आरोप लगाए तर तिमी गलेनौ अझ अगाडी बढेउ । तिमीले अलपत्र रहेको अप्टिकल फाईबरलाई गति दियौ । आज टेलिकमको फोर जि प्रयोककर्ता बढे अनि एनसेलको फोरजी प्रयोककर्ता छ लाख घटे यस्मा तिम्रो के दोष ?
२. तिमीले नेपालको आफ्नै सेटेलाईट राख्ने सपना देख्यौ । त्यो अरु कसैले पूरा गर्न सकेका थियन । तर, तिमी आएपछि नेपालीको यो सपना साकार भयो । अब नेपालले भारतीय सेटेलाईट प्रयोग गर्नु नपर्ने भयो यस्मा तिम्रो के दोष ?३. तिमी संचारमन्त्री भएपछि बेहाल भएका सरकारी संचार माध्यमले ज्यान पाएका छन् । गुमनाम गोरखापत्र आज भोली देखिएको छ । त्यति मात्र हैन नाफामा जान थालेको छ । नेपाल टेलिभिजन र रेडियोको मर्ज गरेर ब्यबस्थापनमा सुधार ल्याउने तिम्रो प्रयास जारी थियो । त्यसमा तिम्रो के दोष ?
४. कथित अडियो प्रकरणमा २८ अर्बमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने भनिए नि त्यो त तिमीले १८ अर्बमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका रहेछौ नी । यस्मा तिम्रो के दोष ।५. चौधरी ग्रुप लगाएतले ग्रामिण क्षेत्रमा टेलीफोन सन्चालन लाईसेन्स लिएर अनुदान पचाउने अनि राज्यलाई दिनुपर्ने कर नतिर्न खोज्दा तिमी झुकेनौ छौ । कथित घरहानासँग नझुकिए सत्यकर्ममै लाग्यौ, अडिक भयौं यस्मा तिम्रो के दोष ?
६. तिमीले आफुले प्रतिनिधित्व गरेको जिल्लाका जनतालाई समृद्धिको सपना साकार पार्न सयौं योजना कार्यान्वयन गरेउ ,काभ्रेली जनतालाई आश देखाएयौं, विकास र समृद्धिप्रती एकढिंका बनायौ र जगायौं, यसमा तिम्रो के दोष ?
सुरुमा त मलाई पनि लागेकै हो, कतै तिमीले काम विगार्यौ कि भन्ने । टेप पछि जब महिले तिमीले सेक्युरेटी प्रेसका लागि चालेका कदमहरु हेर त्यसपछि भने भने मैले बुझे हो तिमीमाथि षडयन्त्र भएकै रहेछ । बाहिर ल्याईएको टेपमा भनिएजस्तो सेक्युरेटी प्रेस किन्न नत तिमीले २७ लाई २८ बनायौं नत भनिएको स्विस कम्पिनीसँग नै काम गर्यौ । बरु तिमीले सक्दो लागत घटायौं ।
सरकार टु सरकार प्रकृया बढाएर कमिशनको नाउँ निसानै नहुने काम गर्यौ । मलाई थाहाँ भो तिमीले काम बढाएदेखिनै न्वारनदेखिको बल लगाएकाहरुले तिमीलाई गलाउनसक्नेसम्म गलाउन खोजेकै थिए ।जनताको बीचबाट उठेका तिमी जनताको पक्षमा लागि नै रहँदा अन्तत दलालहरुको शिकार बनेछौ ।
बार्षिक ७ अर्बको छपाइएको काम नेपालमै गर्न खोज्नु, बर्षैदेखि रोकेर धुलो लागेका फाइल अगाडी बढाउँदै छिटोभन्दा छिटो प्रेस ल्याउने तिम्रो प्र’यत्नले खाइ पाइ आएकाहरु झस्किए होलान् ?
कथित मिडियाका नाउँमा श्रमजीवि पत्रकार ऐनको पालना नगर्ने मिडियालाई तिमीले न्यूनतम पारिश्रम नदिए राज्यबाट दिने सेवा र सुविधा रेकेबाटै अतालिएकै थिए । श्रममाराहरुका लागि तिमी आँखाको कंसिगर बन्यौ रत तिनीहरु लागे ।
टेपमा आएजस्तो नत तिमीले त्यसका लागि कुनै बैठक राख्यौ, नत कुनै प्रकृया नै अगाडी बढायौं । नत त्यो टेपमा आएजस्तो गरी नै काम हुँदै थियो । त्यसैले प्रिय गोकुल तिमीमाथि छरिएका झुटका पुलिन्दाहरुलाई एक एक गरी चिर्नै पर्छ ।बेमानीहरुका भ्रममा केही दिन दुनियाँ तमासेबन्ला तर इतिहास र तथ्यले तिमीलाई सधै धुमिल्याउनसक्ने तागत उनीहरुसँग छैन । तिमी फर्केर आउ गोकुल कामरेड । यो रास्ट्रलाई तिम्रो खाचो छ ।-विकास थापा
अभिनेत्री काजल अग्रवालको विवाह आज, यी व्यक्तिसँग लिँदैछिन् सातफेरो
बास्कोटाले ७० करोड डिल गरेको भिडियो मंगलबार अख्ति,यारलाई बुझाउदैछु : विजय मिश्र
ओलीले जनताकाे घाँटी निमाे`ठेका छन् : माधव नेपाल
Breaking : अध्यादेश फिर्ता लिन ओली सहमत,,,हेर्नुहोस् ।
नेपाल आ,र्मी उत्रियो विप्लव बिरु,द्ध , विप्लव लाई पर्न सक्छ भारि